> Resource > Utility > Sidee Dayactirka Hal.dll Error oo maqan
Hal.dll, magaca gaaban Hardware u dhexgalno lakabka, waa lakab barnaamijyada nidaamka qalliinka ah oo isku xirta hardware iyo software ka kooban computer ah. Waa file a link firfircoon maktabadda oo fuliya shaqo ee Hal.
Fariin qalad Hal.dll
"Markii aan beddelaan kombiyuutarka Baadi soo socda ayaa la soo bandhigay,
system32hal.dll maqan yahay ama musuqmaasuq fadlan dib nuqul ah faylka ku xusan "
Sidee si ay u cusboonaysiiyaan baadi Hal.dll?
Marka "hal.dll maqan ama musuqmaasuq" Fariinta dhacdaa, waxaa jiri kara sababo kala duwan, sida file Hal.dll maqan ama dhaawac, entries munaasib ahayn in Boot.ini soo gudbin haddii ay jiraan laba hawlgalka nidaamka on your computer, ama entries qaldan BIOS ee drives disk ah, iwm Sida caadiga ah baadi Hal.dll taasi ka dhigi kartaa Disable computer si aad u la booted kor. Waxaa dhab ahaantii waa wax fudud in la hagaajin baadi Hal.dll. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay a Hal.dll baadi jiheeye, iyo Wondershare LiveBoot waa qalab noocan oo kale ah, kuwaas oo kaa caawin kara in ay si buuxda u cusboonaysiiyaan, xitaa aadan kabaha kartaa nidaamka. LiveBoot waxa uu ku siinayaa CD, DVD iyo USB drive u user si aad kor Windows.
Tallaabada 1. Geli CD ah, DVD ama USB drive ee LiveBoot, iyo bilowdo your computer.
Tallaabada 2. Bilow your computer by doorashada "Boot ka LiveBoot" on Menu Boot ah in aad computer galaan nidaamka WinPE ah.
Tallaabada 3. Markaas riix "Windows Recovery" tab dusheeda oo ku dhacay "Boot Files Recovery" menu bidixda.
Tallaabada 4. Haddii aad isticmaalayso nidaam hawlgalka kala duwan on your computer, dooran bartilmaameed ka mid ah oo uu bilaabo shaqada iskaanka ah. Haddii ay jirto mid kaliya, waxaad ka boodi kartaa tallaabadan.
Tallaabada 5. Haddii sawirka sheegay file ka maqan ama kharribeen, fadlan bilaabi soo kabashada. Haddii aan, waxaad riixi kartaa "Cancel" in ay xirto barnaamijka.
Hadda ka baxo disk ka your computer iyo guuleysatey computer ka, ka dibna waxaad ka heli doontaa in aad Windows caadi ugu soo noqonayso.